Amathrekhi wezobuchwepheshe: Isitoreji / i-MAM - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni We NAB Show - NAB Show LIVE
ICingularity ikhetha i-PHABRIX Sx yamandla nokuthwala ekusakazweni kwezemidlalo
IMaryTV Ihamba neGlobal neMedialooks Video Transport
I-Framestore future-Proofs VFX Workflows ene-AWS
Umklomelo weTrans Thanh Huy woMklomelo weFilimu oHlangabelwe ngeRaVinci Resolve Studio
I-Esports Shapeshifting ngeNewTek ne-NDI®
U-Amino no-24i ukuze baguqule umnikelo we-TV ka-Youfone
Ikhaya » Okufakiwe » Amathrekhi wezobuchwepheshe: Isitoreji / i-MAM
Amathrekhi wezobuchwepheshe: Isitoreji / i-MAM
UNamdev Lisman, Iphini Likamongameli Ophethe, uPrimestream
Isitoreji kungumsebenzi wokubambelela ezintweni uze uzidinge futhi, futhi ngenkathi lokho kungabonakala njengendawo engaguquki futhi e-static, eqinisweni kuphambene. Umkhakha ugcina usungula futhi abadali bokuqukethwe bahlala bekhuthaza ukuqhutshwa komsebenzi wabo. Umphumela uba ukuthi isitoreji futhi okufunayo kukho kuyinkomba eshukumisayo. Sibonile umjikelezo wobunzima obuthuthukisiwe wezinketho zesitoreji esingasisekelo kanye nejubane elingcono lokuthembeka nokufinyeleleka. Njengoba ubuchwepheshe buye baqhubeka nokuthuthuka siye sabona imboni iqhubeka ngezigaba ezimbalwa ekuqaleni iqala ngokwenza iidijithali, bese idlulisa impahla kubezindaba ezintsha nasezinhlelweni njengoba ubuchwepheshe buqhubekele phambili. Manje sesibona idatha ihamba iye efwini lapho isendlalelo esingabonakali sikhishwe kukhasimende, kanye nazo zonke izingqinamba eziseduze nokuligcina libuye liyithuthukise. Imboni isuke ebhokisini lamateyipu noma ifilimu ebeliphansi kwedeski lomkhiqizi liye ku-Object Storage elihlala endaweni okungekho muntu kithi ongakhomba kuyo.
Ngenkathi izixazululo ezenzelwe amafu zisekude ngokomzimba, ukuvela kokusebenza okusha kubopha lokhu okuqukethwe ukungena kokusebenza okulindele ukutholakala kwe-100%, ukufinyelela ngokushesha, ukusesha, ukubuyisa, kanye nekhono lokusebenza ngezindlela ezintsha ukudala ukusakazwa kwemali entsha. Yilapho imithombo yezindaba egciniwe inganele yodwa. Imethadatha ezungeze imidiya idinga ukufinyeleleka, futhi leyo metadata ingaba yinoma yini kusuka kumatemu wokusesha, ukusetshenziswa, okubhaliwe kwe-AI ekhiqize idatha yokuqinisa kanye nokufinyelela kumaphrofeshini angasetshenziswa ngokushesha ngenkathi imidiya ephezulu yokulungiswa idluliselwa endaweni yokukhiqiza.
Konke lokhu kudinga a Ukuphathwa Kwempahla Yezindaba (MAM) isixazululo esingagcini nje ngokwazi ukuthi wenzani okwamanje, kodwa nokuthi wenzeni esikhathini esedlule. Eqinisweni, i-MAM idinga ukubamba iqhaza elibalulekile ekuthumbeni, ekukhiqizeni, ekuphatheni nasekuhambiseni imidiya. I-MAM kudingeke ukuthi ivele kusuka kumathuluzi angavele abambelele kulwazi oludinga ukuqonda ingqikithi yolo lwazi.
Namuhla, ukuze i-MAM isebenze ngaphandle komthungo, idinga ukuqonda amakhono aqukethwe kwisitoreji esingaphansi. Impendulo yokuthi ihlala kuphi imithombo yezindaba idinga ukuqokelelwa ngokuchasene nalokho abasebenzisi abafuna ukwenze ngakho ukuletha ukuqhutshwa komsebenzi okuletha amazinga amasha wokukhiqiza. I-MAM idinga ukuxazulula izingxabano nezinkinga kulo lonke ukuhamba kwamakhasimende njalo ngenkathi igcina nokuguquguquka kokusebenza ngezindlela ezintsha ngokuzayo, noma lapho izidingo zishintsha ngokuzumayo. Ukusesha okulula kocezu lwabezindaba kungaletha imethadatha, isithonjana nolunye ulwazi ukukutshela ukuthi ngabe yimidiya oyifunayo noma cha. Okwenzekayo ngokulandelayo kudinga ukuqinisa lokho ofuna ukukwenza, lapho ukhona nokuningi.
Uma ufuna ukusebenzisa imithombo yezindaba bese abezindaba bebanjelwe endaweni yokukhiqiza, lapho-ke konke i-MAM okufanele ukwenze ukukukhombisa kwabezindaba bese uhamba. Noma kunjalo; uma endaweni eyodwa futhi imidiya igcinwa efwini, noma endaweni yesibili, i-MAM idinga ukulandela isethi yemithetho yebhizinisi esekela lokho okudingeka kwenzeke. Ngabe ufuna ukuhambisa abezindaba endaweni yakini? Ngabe ufuna inguqulo yommeleli? Ngabe ufuna yonke imidiya yokulungiswa okuphezulu noma ukukhethwa kwayo nje? Izimpendulo zale mibuzo neminye zichaza ukuthi isisombululo se-MAM sikwenzelani ngemuva kwezigcawu. I-Primestream inenjini yemithetho eyakhelwe ngaphakathi ukwenza isethaphu sohlelo singalungiswa futhi sinemininingwane - abanye abathengisi baxazulula le nkinga ngezindlela ezihlukile.
Ukuxhumana phakathi kohlelo lwe-MAM nesixazululo sesitoreji kudinga ukucabanga ngejubane, indawo, indlela kanye namandla okugcina uqobo, kepha ubudlelwane phakathi kwalokho okugcinwe nokuhlala lapho kuhlala khona nokubuye kucatshangelwe uhlelo lwe-MAM oludingayo ukuphatha. Kubalulekile ukuthi uhlelo luqonde ukusetshenziswa kanye nesimo semidiya kulo lonke ibhizinisi, ukuze indawo yokugcina ingalawulwa. Akunandaba ukuthi isitoreji esishibhile noma esifinyeleleka kangakanani sikhona isidingo sokuphatha abezindaba ngendlela yokuthi izinhlamvu eziphindwe kabili zivikeleke futhi imithombo yezokuxhumana ihanjiswe lapho futhi inqubo ihamba nini, ngokungahambisani nokuthi kube nezinxushunxushu ezizofika ngenxa yomsebenzisi ngamunye noma Umnyango onquma ukuthi ungayiphatha kanjani inqubo.
Ngenkathi i-MAM neSitoreji zihlala zinobuchwepheshe obuhlukile obuhlukile, zihlanganiswe eduze kakhulu ukuze abasebenzisi bangabe besazithatha njengezihlukanisi. Isilondolozi se-Object kuwukukhishwa okuphelele kokwazi kahle ukuthi ukuphi imidiya yakho, futhi kukude kakhulu nokuphuma kwefolda yamafayili abantu abaningi abaqale ngayo. Abantu basaqhubeka nokufuna imininingwane ngezindlela ezimbili: bayazi ukuthi kukuphi futhi bafuna ukuya khona ngqo ukuthola lokho abakudingayo, noma bakufuna besebenzisa imethadatha abona sengathi izothela imiphumela efanele.
Indlela yokuqala iholele abantu ekwakheni izakhiwo zamafolda ezazidinga ukulandela ngokucophelela ukuze kugcinwe ukuhleleka, okwesibili kwaba yindlela izixazululo ze-MAM zikhulisa ngayo amandla ethu. Manje sibona izinhlelo ze-MAM ezinamafolda abonakalayo evumela abasebenzisi ukuthi baqoqe okuqukethwe bakubeke lapho bafuna khona, kepha lezi "zindawo" azihambisi empeleni abezindaba. Ngesichibi sokugcina nesakhiwo esisetshenzisiwe, izithiyo eziningi ezingumphumela wezingqinamba zezingqimba ezingokwenyama ezakhiwe phezu kwazo zisusiwe. Njengoba ubuchwepheshe buqhubeka nokuhlinzeka ngezinketho eziningi, sizoqhubeka nokwakha ukuguquguquka okungaphezulu kwizisombululo esizisusayo. Siyaqhubeka nokubona ukuthi amakhasimende ayaqhubeka nokuthola izinselelo ezintsha, ukuhamba komsebenzi, kanye nezinzuzo esingazisiza ukuba zizame ukufeza.
Lokho Ongakufunda Kokusakazwa KweHollywood - Disemba 9, 2019
I-Esports Shapeshifting ngeNewTek ne-NDI® - Disemba 9, 2019
IYunivesithi yaseSail Egcwele Iyasebenzisana Nenethiwekhi ye-TVU Yokunikeza Amandla Ezizukulwane Ezilandelayo Zezemidlalo - Disemba 3, 2019
I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Ama-spears nama-Arrows Storage I-TVU Izinethiwekhi	2019-08-06
Ngaphambilini: Imikhiqizo ye-TSL Iveza Ukuthuthuka Kwamuva ku-SAM-Q Audio Monitoring Platform entsha ku-IBC 2019
Olandelayo: I-Zixi: Ihambisa Ngokuphepha, Live-Broadcast-Video Video over IP